Gbanwee foto gaa na onyonyo ASCII na Ascii Generator 2 | Akụkọ akụrụngwa
Ascii Generator 2 bụ ngwa na-atọ ụtọ nke anyị gafeworo ga-enyere anyị aka mepụta ọmarịcha nka na ole na ole, a ga-egosipụta na koodu ASCII dị iche iche.
Ọ fọrọ nke nta ka anyị mesie gị obi ike na ọrụ a ga-abụ otu n'ime ọkacha mmasị nke ọtụtụ, n'ihi na ọbụlagodi Enwere ike iji Ascii Generator 2 mee ihe n'efu na n'efu, ebe ọ bụ na ngwá ọrụ ahụ bụ ihe mepere emepe. Anyị ga-ekwu usoro aghụghọ ole na ole n'okpuru, nke ezubere iji mee ka onyogho anyị gbanwere na koodu ASCII nwere ọdịdị dị adị na mkpesa pụrụ iche.
Oke iji aka na Ascii Generator 2
Nke mbu, anyi aghaghi ikwu aha ngwa a 2 Ascii Generator XNUMX o nwere ike ịchọ nwụnye nke. Net Frameworks, ihe nke ụdị Windows ugbu a nwere; Have ga-ebudata ngwá ọrụ ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, enwe ike iji ya obere ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ka arụnyere na kọmputa. Ntọala dị iche iche nke ngwa ọrụ a na-eweta anyị dị mfe ịchịkwa, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-akọwa ụdị mkpụrụ edemede ga-abụ akụkụ nke ihe oyiyi na koodu ASCII. Anyị nwekwara ike gbanwee nchapụta na ọdịiche nke onyonyo rụpụtara, ihe ga-adị mma n'anya ma ọ bụrụ na anyị ejikwa njirimara 2 ndị a n'ụzọ zuru oke n'ime ngwa ngwa ahụ.
Anyị atụpụghị akụkụ dị elu karịa nkuzi vidiyo, nke anyị ji rụọ ihe oyiyi site na ịtụgharị ya ngwa ngwa na usoro dị mfe, gaa na onyonyo nwere koodu ASCII. Site na Ascii Generator 2 a na-enye anyị ohere ịchekwa nsonaazụ ikpeazụ na ụdị dị iche iche, otu n'ime ha bụ, ederede ederede doro anya ebe ndị a pụrụ iche ga-anọ; usoro mmepụta nke ọzọ bụ onyonyo n'onwe ya, nke anyị nwere ike ịnwe na jpeg na png, bmp, gif na ole na ole ụdị eserese ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi gbanwee foto gaa na onyonyo ASCII dị mfe na Ascii Generator 2
Esi gbanwee mkpụrụedemede na gam akporo ma ọ bụ na-enweghị mgbọrọgwụ